बम पड्काएर, मान्छे मारेर सत्ता आउँदैन: पदम राई - Nepal's Digital News Paper
बम पड्काएर, मान्छे मारेर सत्ता आउँदैन: पदम राई
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य पदम राई आइतबार सत्तारुढ नेकपामा प्रवेश गरेका छन् । पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले टीका लगाएर उनलाई भित्र्याए । उनै नेता राईसँग विप्लव समूह छाड्नुको कारणबारे एसकाठमान्डुका राजकुमार श्रेष्ठले गरेको संक्षिप्त कुराकानी:
० विप्लव नेतृत्वको नेकपामा तपाईं पोलिटब्युरो सदस्य हुनुहुन्थ्यो । त्यो पार्टी छाड्नुपर्ने गरी त्यस्तो के असहमति भयो ?
म नेकपाको पोलिटब्युरो सदस्य थिएँ । त्यो भनेको पार्टीको राजनीतिक ब्युरो हो । मैले नेकपाको राजनीतिक ब्युरो सदस्य हुनुको हैसियतले वार्तामा जानुपर्छ भनेको थिएँ । किनभने, द्वन्द्वबाट नेपाल र नेपाली जनतालाई फाइदा भएको इतिहास छैन । वार्तामा जानुपर्छ भन्दा मलाई निलम्बन गरिएको कुरा बाहिर आयो । यसबारे आधिकारिक खबर त अझै आएको छैन । त्यसपछि त्यत्तिकै बसिरहेको थिएँ । प्रचण्डले बोलाएर आज टीका लगाइदिनुभयो । म राजनीतिक मान्छे, चुप लागेर बस्न पनि त नसकिने रहेछ ।
० तपाईंले यति कारणले नै विप्लवको साथ छाड्नुभएको हो कि सैद्धान्तिक असहमति पनि थियो ?
त्यो त प्राविधिक कुरा भयो । बम पड्काएर, मान्छे मारेर सत्ता आउँछ भन्ने कुराबाट मचाहिँ मुक्त छु । १० वर्षको युद्धले पनि हामीलाई त्यो कुरा सिकाएको छ । जहाँसम्म सैद्धान्तिक कुरा छ, पार्टीले लिएको एकीकृत जनक्रान्तिको सिद्धान्तमा मेरो असहमति होइन । तर, विप्लव नै त्यो बाटोमा हिँड्नुभएन । सरकारले वार्ता आह्वान गर्दा मैले वार्तामा जानुपर्छ भनेको थिएँ । झापा विद्रोहदेखि जनयुद्ध गरेका नेता एक ठाउँमा आउनुभएको छ । उहाँहरूकै सरकार छ । बसेर छलफल गर्दा देशलाई फाइदा हुन्छ भन्ने लागेर मैले त वार्ताको कुरा गरेको थिएँ । यो विषयमा कुरा गर्न खोज्दा विप्लव कमरेडले भेटसम्म दिनुभएन । एउटा पार्टीको राजनीतिक ब्युरोको सदस्यले पार्टीभित्र राजनीतिक कुरा मूल नेतृत्वलाई राख्न नपाइने हुन्छ ?
एकीकृत क्रान्तिको सिद्धान्तमा मध्यम वर्गलाई समेटेर जाने, । सहर पनि नछोड्ने गाउँ पनि नछोड्ने भनिएको छ । वार्ता नगर्ने, भूमिगत हुने, हिंसात्मक गतिविधिमा जाने कहाँ भनेको छ ? नेतृत्व पार्टी लाइनबाट च्युत भयो भन्ने मेरो कुरा हो ।
भोजपुरमा एक जना कार्यकर्ता मारियो । त्यसपछि नेतृत्वले त्यसको बदला लिन खोज्दा राजधानीमा चार जना युवाले ज्यान गुमाउनुपर्यो । यसरी बदलाको भावमा जाने हो भने क्षतिभन्दा अरू केही हात लाग्दैन ।
प्रतिबन्धित नेकपामा रहेका नेता-कार्यकर्तालाई केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
उहाँहरूप्रति मेरो भन्नु केही छैन । त्यो पार्टी छाड्नुस् । गलत बाटोमा हिँडेर कतै पुगिँदैन । त्यहाँ अब केही हुँदैन । यता आउनुस् । अब के के न भइहाल्छ भन्ने पक्षमा म छैन । साथीहरू लागिरहनुभएको छ । ठीक बेठीक के हो भन्ने सबै बुझ्ने साथीहरू हुनुहुन्छ । मेरो भनाइ यति मात्रै हो कि जुन उद्देश्यले पार्टी बनाइएको थियो, त्योभन्दा गलत बाटोमा पार्टी हिँडिरहेको छ ।